Wararka - Sidee Loo Qasbaa Koollada -Xalka -Ka -Darka ah?
Sidee Loogu Qasbaa Koollada-Aan Xalka-lahayn?
Hadda waxaa jira laba nooc oo ah dhejisyada aan xalka lahayn ee loogu talagalay isku-darka baakadaha dabacsan, hal iyo laba qaybood. Qaybta keli ah ayaa inta badan loo adeegsadaa waraaqaha iyo kuwa aan duubnayn, kuwaas oo lagu shaqayn karo iyadoon la isku darin oo aan la hagaajin saamiga. Labada qayboodba waxaa loo isticmaali karaa filim baakado dabacsan oo kala duwan. Iyada oo ku saleysan waayo -aragnimada shaqsiyeed, boggani wuxuu sharxi doonaa sida loo beddelo saamiga laba qaybood ujeeddooyin kala duwan iyo sida ay u shaqayso.
Marka hore, mabda'a saamiga isku-dhafka ah ee wax-qabadyada dahaarka leh ee aan xalka lahayn ayaa loogu talagalay.
Waxaa jira saddex arrimood oo ku saabsan naqshadda saamiga isku dhafka ah ee koollada dahaarka leh ee aan xalka lahayn:
1. Isku day inaad isbarbar dhigto saamiga isku dar ah ee qaybaha A & B iyo miisaanka.
Isugeynta isku darka isku dhafan ee A / B waxay leedahay faa'iidada ah inay isku miisaan yihiin. Tusaale ahaan, X waa 100A oo lagu daray 90B, Y waa 100A iyo 50B. 1 % isbeddelka B wuxuu keeni doonaa 1.1 % miisaanka oo la beddelo qayb ka mid ah X iyo 2 % Y. Guud ahaan, 2 % isbeddelka saamiga isku -darka ayaa la aqbali karaa inta lagu jiro habka wax -soo -saarka, taasoo keenta in miisaanka la beddelo 2. 2 %iyo4%. Haddii miisaankoodu aad u kala duwan yahay, tani waxay u horseedi kartaa cilladaha soo socda:
(1) Qaybaha A / B way adag tahay in si fiican laysugu daro si isku darka uu u noqdo qoyaan aan joogto ahayn.
(2) Maqnaanshaha qayb B, cadaadiska fiicnihu aad buu u hooseeyaa si loo hubiyo socodka joogtada ah, taas oo horseedaysa weecashada dhejiyeyaasha iyo hoos -u -dhaca wax -soo -saarka.
2. Sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee u nuglaanta qaybaha A & B
Hoos -u -dhaca qaybaha A & B heerkulka ku habboon, ayaa ka sii fiican saamaynta isku -darka. Iyadoo la tixgalinayo ficilka dahaarka, isku dheelitirka asalka ah ee labada qaybood aad ayuu uga duwan yahay. Heerkulka waa in si gooni ah loo kontaroolaa si loo hagaajiyo qiimaha muuqda. Kordhinta heerkulka qaybta asalka ah oo leh dheecaan sare ayaa ka dhigaysa mid u dhow qaybta kale, waxayna faa iido u leedahay aaladda qiyaasta isku darka iyo bamka wax soo saarka.
3. Kordhinta dulqaadka isku dhafka A & B
Sababo la xiriira waxyaalo dibadeed oo ka mid ah dahaarka, waa in ay jiraan waxoogaa weecasho ah marka la isku daro saamiga. Ballaarinta dulqaadka saamiga isku -darka isku -darka A / B ayaa si waxtar leh u magdhabi kara saamaynta taban ee leexashadaas. Tusaale ahaan, dareeraha caagga ah ee xarkaha xorta ah ee WD8118A / B ee walxaha cusub wuxuu u dhexeeyaa isku -darka caadiga ah ee 100: 75 ilaa isku -dar ah 100: 60 - 85, oo labaduba la aqbali karo isticmaalkooda oo ay si fiican u heleen macaamiil badan.
Marka labaad, mabda'a iyo habka isku -dhafka saamiga isku -dhafan
(1) Loo habeeyay heerkulka iyo huurka
Guud ahaan, nuxurka NCO ee ku jira qaybta A ayaa sarreeya, halka falcelinta hawada iyo uumiga filimka ku yaal dhinaca bidixda. Si kastaba ha ahaatee, inta lagu jiro bilaha xagaaga, marka ay hawada uumi badan tahay oo filimku leeyahay qoyaan sare, qaybta A waa in la kordhiyaa si loo cuno uumi xad -dhaaf ah, taas oo sahli doonta falcelinta habboon ee dhejiska.
(2) Loo hagaajiyay maaddada khad iyo hadhaaga dareeraha
Baakadaha dabacsanaanta badankoodu waa filim daabacan, habka daabacaadda gudaha waxaa ku jira daabacaadda soo -jiidashada qalinka. Maaddooyinka ku-milma dareeraha sida wax lagu daro waxaa jiri doona dhalanteed iyo dib-u-haye, labaduba waa nidaam cusbi oo polyurethane ah, oo ku dheggan oo leh falcelinta NCO waxay cuni kartaa xoogaa NCO ah.
Waxaan ka welwelsan nahay nadiifnimada iyo qoyaanka dareeraha haraaga ah. Waxay ku sii jiri doonaan wax ka badan ama ka yar daabacaadda, iyo haroojiin firfircoon oo hadhay ayaa baabbi'in doonta qaar ka mid ah NCO. Haddii hadhaaga khafiifka ah iyo kuwa dib -u -dhaca ahi ay ka sarreeyaan, waxaan ku dari karnaa qaybta A si loo hagaajiyo natiijooyinka.
(3) Lagu hagaajiyay wareejinta aluminiumka
Qalab badan oo dabacsan oo dabacsan ayaa hadda aluminium ah, saamaynta walbahaarka ee dahaarkana waa la dhimi karaa iyadoo la hagaajinayo saamiga isku dhafka ee qaybaha A / B si loo jilciyo, guud ahaan si habboon loo kordhiyo qaybta B loona yareeyo kala -wareejinta gobolka ee aluminiumka iyada oo loo marayo dhejisyada dhexgalka .